Lineage2M – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
အားဖြင့် အက်မင် | ဒီဇင်ဘာ 1, 2021
သင်ဟာ ကစားသမားလား၊ အောင်နိုင်သူလား။? ကမ္ဘာအနှံ့ စင်မြင့်ပေါ်တွင် တောင်ကိုရီးယားမှ NCSOFT ၏ ထိပ်တန်းမိုဘိုင်း MMORPG ကို ရှာဖွေပါ. ရောယှက်တိုက်ကြီးနှစ်တိုက်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပျံ့နှံ့နေသော စစ်ကြမ်းကမ္ဘာတွင် သင်၏စွမ်းအားကို စမ်းသပ်ပါ။. NCSOFT ၏ လူကြိုက်များသော Lineage2 franchise သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကစားသမားများသည် ခမ်းနားသောပွင့်လင်းသောကမ္ဘာကြီးတွင် ရာထူးကြီးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သည့် ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာဖြင့် မိုဘိုင်းသို့ ရောက်လာသည်. Lineage2M တွင် MMORPG များအတွက် ခေတ်သစ်ကို ခံစားလိုက်ပါ။.
▣ MMORPG ၏ခေတ်သစ်ရောက်ရှိလာပါပြီ ▣
Lineage2M တွင် 4K UHD ဖြင့် 3D အပြည့်ရှိသည်။, မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် ရရှိနိုင်သော အမြင့်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်. သေသေချာချာ ချပ်ဝတ်တန်ဆာပုံစံများနှင့် အသေးစိတ် ဇာတ်ကောင်အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ရေးဆွဲထားသည်။, Lineage2M သည် ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။. ၎င်းသည် ကစားသမားပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုရုံးစေပြီး ရောယှက်တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင် တိုက်ခိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်သည်။.
▣ အမြင့်ဆုံးအတွက် တိုက်ပွဲ ▣
ကြွယ်ဝသော အမျိုးမျိုးသော အပြေးပြိုင်ပွဲများဖြင့် ကစားပါ။ 31 အဆင့်မပျက်ဘဲ အတန်းများ တိုးတက်မှု! လူသားများ, Elves, Dark Elves, လူပု, နှင့် Orcs သည် တိုက်ကြီးနှစ်ခုတွင် ခိုးယူမှုနှင့် အာဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သည်။. Lineage2M ၏အတန်းများတွင် အလွန်လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဓားနှင့်ဒိုင်းနိုက်များပါဝင်သည်။, dual- bladed Warrior, လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု တိကျသေချာသော Raider တစ်ဦး, အကွာအဝေး တိုက်ခိုက်ရေး ဝါသနာရှင်များအတွက် Archer, သန့်ရှင်းသောကုစားနိုင်သောတန်ခိုးတော် Orbs ကိုကိုင်ဆောင်သော ဓမ္မဆရာ, နှင့် မှော်ဝန်ထမ်း နှင့် မှော်ဆရာတစ်ဦး. လက်နက်အသစ်များကို အဆင့်မြှင့်ပြီး စုဆောင်းကာ ပုံမှန်တစ်ဦးချင်းနှင့် မျိုးနွယ်စုရှာဖွေမှုများဖြင့် အဆင့်မြှင့်ပါ။.
▣ အောင်ပွဲခံကမ္ဘာကို စူးစမ်းပါ ▣
ကျယ်ပြောလှသည်။, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကစားသမားများကို တပြိုင်နက် တွေ့ဆုံနိုင်စေမည့် စိမ်းလန်းစိုပြေသော ပွင့်လင်းကမ္ဘာ, Quest အမျိုးမျိုးကို သွားပါ။, လောကကို အောင်လော့. Aden ၏ ချောမွေ့သော တိုက်ကြီးနှစ်ခုကို ခြေလျင်ဖြင့် သို့မဟုတ် တယ်လီပေါ်တာများနှင့် ခမ်းနားထည်ဝါသော လှိုင်းလုံးများပေါ်တွင် ပျံသန်းခြင်းတို့ဖြင့် သွားလာနိုင်သည်။. ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ပါ။, ကျင့်ဝတ်ကို အနိုင်ယူပါ။’ Giran ရဲတိုက်၏ အုတ်တံတိုင်းများတွင် အလုံးအရင်းရှိသည်။, Talking Isle Village တွင် သင်၏ စွန့်စားသူများနှင့် ပေါင်းသင်းပါ။.
▣ Lineage 2M Official ရပ်ရွာ ▣
※ နောက်ထပ် Lineage2M သတင်းအတွက်, တရားဝင် website ကိုစစ်ဆေးပါ။!
※ ဝဘ်ဆိုဒ်: https://lineage2m.plaync.com/naeu/
※ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်နာပါ။
▣ PURPLE ▣ ဖြင့် Lineage2M
PC မှချိတ်ဆက်သောအခါ, PURPLE နှင့် Lineage2M ကို အတူတကွ တပ်ဆင်နိုင်သည်။.
▣ Lineage 2M သည် ချောမွေ့သောဂိမ်းကစားရန်အတွက် အောက်ပါခွင့်ပြုချက်များ လိုအပ်သည်။.
ရွေးချယ်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို သင်သဘောမတူပါက ဂိမ်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
– သိုလှောင်နေရာ (စက်ဓာတ်ပုံများ, မီဒီယာ, ဖိုင်များ): မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးနောက် ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းရန် ခွင့်ပြုချက်
– အသံ: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်အခါ အသံဖမ်းရန် ခွင့်ပြုချက်
* ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဘယ်လို ရုပ်သိမ်းမလဲ။
– ရယူပိုင်ခွင့်ကို သဘောတူပြီးနောက်, သင်သည် အောက်ပါအတိုင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။.
– အန်းဒရွိုက် 6.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း: ချိန်ညှိချက်များ > လျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှု > Lineage2M > ခွင့်ပြုချက်ကို ရွေးပါ။ > ဝင်ရောက်ခွင့်ကို သဘောတူသည် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပါ။
– Android အောက်မှာ 6.0: အသုံးပြုခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် အက်ပ်ကို ဖျက်ရန် လည်ပတ်မှုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်ပါ။
* အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ: RAM 3GB ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Lineage2M
← စိတ်ကူးယဉ်ပုံ – လှိုင်သာယာ&Hack Police Sim 2022 – လှိုင်သာယာ&Hack →